warkii.com » Sababtii Keentay Inay Rekha Ka Ilmeysiiso Aamir Khan Oo Bannaanka Lasoo Dhigay
Sababtii Keentay Inay Rekha Ka Ilmeysiiso Aamir Khan Oo Bannaanka Lasoo Dhigay
Aamir Khan ayaana abaalmarinno shaqsi ah ku helay bandhig jilliinkiisii filimka Dangal , sidoo kale waxaa loo soo jeediyey ammaan shaqsi ah marka laga tago ganacsigiisii heerka sarre ahaa ee uu Dangal ka sameeyey gudaha India iyo daafaha caalamka.
Aamir Khan ayaa xitaa u dabaaldegay guulaha filimkiisa Dangal wuxuuna xafladdaas ku casuumay xiddigo ka xamaasha Bollywood. Waxaana ku jiray Shahid Kapoor iyo xaaskiisa Mira Kapoor, Ranbir Kapoor iyo Jeetendra.
Atariishada halyeeyga ka ah Bollywood Rekha ayaa sidoo kale soo xaadirtay xafladdaas. Si kastaba ha ha ahaatee, Rekha intaas kuma aysan simin, waxayna abaalmarin gaar ah usoo iibisay AK iyadoo farta ka saartay ka dibna Mr. Perfectionist illin ayaa indhihiisa soo dhaaftay.
Xitaa Rekha waxay u keentay Aamir Khan warqad ay gacanteeda ku qortay oo ay ugu sheegeyso sida ay ula dhacday bandhig jilliinkiisii Dangal iyo guud ahaan farriintii uu xambaarsanaa.
Sida Rekha oo kale, Amitabh Bachchan ayaa sidoo kale ammaanay bandhig jilliinka Aamir Khan